इटहरीमा पाँच दिने उद्यमशीलता तालिम सुरु » Khabarbit
इटहरी । प्रविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सानोठिमी भक्तपुरको आयोजनामा शनिबारबाट इटहरीमा पाँच दिने उद्यमशीलता तालिम सुरु भएको छ ।
इटहरीको ओसीयन पार्कमा संचालित तालिमको उद्घाटन प्रतिष्ठानका प्रशिक्षक शालिग्राम डाँगीले एक कार्यक्रमका बीच गरेका थिए । सिटिइभिटी प्रदेश कार्यालय प्रदेश नं. १ इटहरीको संयोजनमा प्रदेश १ का सोलु, भोजपुर, खाँदबारी, तेह्रथुम, इलाम, मोरङ्ग र सुनसरीका ९ जना महिला र ५ जना पुरुषको सहभागिता रहेको छ।
प्रविधिक तालिमहरु सिकेर बसेका युवाहरुलाई स्वरोजगार हुन उद्यमशीलता तालिमले सहयोग पुर्‍याउने सिटिइभिटी प्रदेश कार्यालय प्रदेश नं. १ का उपनिर्देशक पर्शुराम राईले वबताए । उनका अनुसार सहभागीहरुले व्यवसाय भनेको के हो ? व्यवसायिक योजना कसरी बनाउने भन्ने बारे तालिममा सिक्ने छन् ।
तालिममा सिभिल इन्जिनियर, कृषि प्राविधिक, व्यूटीसीयन, कम्प्युटर, इलेक्टीसियन, कुकहरुको सहभागिता रहेको छ । तलिमको सहजीकरण प्रविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रशिक्षक शालिग्राम डाँगी र उद्यमविकाश प्रशिक्षक जिरा राईले सहजीकरण गरेका छन् ।
Tags: इटहरीद्यमशीलता तालिमसिटिइभिटी